Zezulu Unyango Ozone Free Lwe-UVC LEDs HAVC isisombululo uvc ukukhanya germicidal ultraviolet lamp kuba zezulu conditioner, China Zezulu Unyango Ozone Free Lwe-UVC LEDs HAVC isisombululo uvc ukukhanya germicidal ultraviolet lamp kuba zezulu conditioner Manufacturers, Abanikezeli, Ifektri - FETON CORPORATION Co.,Ltd
Unyango lwe-Ozone yoNyango yasimahla ye-UVC i-UVC isisombululo se-UVc ukukhanya kwesibane se-germicidal ultraviolet
Ukusetyenziswa: Ukusetyenziswa kweshishini okanye ukuthengisa
Ukusebenza kakuhle: 99.9% Ukuhlawula ixabiso
Ukwanda kweentsholongwane kunye neentsholongwane kwandise imfuno yokucocwa komoya, ke abantu abaninzi ngakumbi bahlawula ingqalelo yabo kwi-ray ye-ultraviolet ukuze basebenzise inzululwazi kunye nokubulala iintsholongwane.
Masiqale ngeepropathi ze-UVC.
I-wavelength ye-UVC yi-200 ukuya kwi-280nm, ekwabizwa ngokuba yintshutshiso ye-long-wave ultraviolet, is ikakhulu ngokulungileyo ukutshabalalisa izinto zemvelo.
Usenokuba uyazibuza ukuba ngaba simi phantsi kwelanga eline-UVC, ngaba 'singasicekecofa' yiyo? Ngelishwa, impendulo nguhayi.
Nangona amandla okubulala iintsholongwane ukukhanya kwe-UVC yomelele kakhulu, amandla okufakelwa kwezinto (kubandakanya nomoya) abuthathaka kakhulu. Ngaphambi kokufika emhlabeni, zonke izibane ze-UVC ziya kucocwa yi-ozone kwisibhakabhaka.
Kungenxa yeso sizathu kufuneka sisebenzise isiphatho esifana nezibane ze-ultraviolet ukufezekisa ukubulala iintsholongwane.
Ukongeza, kukwathetha iblorho hand-held ultraviolet lamps on the market are useless.
Kuba i-UVC kumthombo wokukhanya ayinakungena kwiglasi, kwaye nokuba ithe yafikelela kwithagethi ngamathuba, yi-5% kuphela yamandla.
Njengoko sonke sisazi, intsholongwane inokufumaneka ndawo yonke, okwenza esi sifo sisasazeke ngokukhawuleza kubemi. Kwaye vIzityholo zinokusasazeka ngokukhawuleza ngamachaphaza amdaka ahamba emoyeni.
Ukucoca umoya, i-UVC inakho work efficiently by causing permanent damage to the DNA or RNA of the bacteria & viruses without the use of chemicals. Yeyona ndlela yokwenza iiseli ezosulelekileyo zilahleko imisebenzi, ukuthintela ukusasazeka kwezifo.
Ukusuka ngasentla, sinokubona ukuba ukuba sifuna ukwandisa ukusetyenziswa kwe-UVC sterilization, kufuneka siyibiyele kwindawo encinci encinci.
Kungenxa yoko le nto sikucebisa I-UVC ekhanyayo ye-LED kodwa ayisiyiyo UVUZO LOKUFAKA. Kwaye kungcono ukuyilwa kwindawo encinci evaliweyo.
Ke ziziphi izibonelelo ze-UVC ze-UVC xa kuthelekiswa nezibane ze-UV ekucoceni umoya?
* Ii-UVC ze-UVC aziyi kuvelisa i-ozone enobungozi emzimbeni womntu, kwaye zinokubususa ngokuphumelelayo ungcoliseko lomoya emoyeni.
* Ii-LED ze-UVC zilungile kubungakanani bemveliso encinci, njenge-duct yomoya opholileyo.
* Ii-UVC ze-UVC inezibonelelo zokusebenzisa amandla asezantsi, ubomi obude kunye nokusebenza ngokuzinzileyo.
Isishwankathelo, Imeko eziphambili zesicelo ze-UVC ze-UVC azikho kwinqanaba lasekhaya, kodwa kwinqanaba lezemizi-mveliso.
Xa isetyenziswa kwindawo emxinwa nevaliweyo, kwaye ayifuni ukwenziwa ngesandla, inokufezekisa owona mgangatho ulungileyo phakathi kokusebenza kunye neendleko.
Kwixa elidlulileyo, indawo yokubambisa yomoya ibulala iintshulube ixesha elide kubushushu obuphezulu, kwaye umda wesiphumo wawunomda kumphezulu we-evaporator, ongenakuqinisekisa ukubulawa ngempumelelo kweentsholongwane emoyeni.
Ngoku, kusetyenziswa itekhnoloji ye-UVC ye-UVC, umoya unokubanjiswa inzala ngexesha lokwenyani ngexesha lokujikeleza, kwaye izinga lokubulala iintsholongwane lifikelela kuma-99.9%.
Kwangelo xesha, ii-LED ze-UVC zibekwe ngaphakathi kwomoya ohambisa umoya, ezikhupha umoya kofakelo wombane nomoya odlulayo, ngenxa yoko awuyi kungena emzimbeni ukukhanyisela umzimba womntu.
Nge-tech ye-UVC ye-UVC, kukho izisombululo ezininzi zokubulala iintsholongwane kwizicelo ezahlukeneyo:
* Ukucocwa kweOfisi
* Ukucoceka kwigumbi lokufundela
* Ukulungiswa kwebhasi
* Ukucoceka kwe Mall
* Ukuthengwa kweesuphamakethi
* Ukucoceka kweefektri
* Ukucocwa kwelebhu
* Ukucocwa kwehotele
* Indawo yokuhlalisa
* Ukunyanzeliswa kwe-Elevator
Ukuba unaso nasiphi na isicelo kwii-UVCs ze-UVC, okanye ungathanda ukwazi ngakumbi malunga nezisombululo zokubulala iintsholongwane, Nceda ushiye umyalezo wakho kwingxoxo enzulu.
Kutheni uninzi lwezibane ze-UV zentengiso zingasebenzi?
Isisombululo se-UVC esisebenzayo se-UVC seMinisplits